Ukuvuselelwa okuzenzakalelayo kwe-WordPress > UVielhuber David
Ukuvuselelwa okuzenzakalelayo kwe-WordPress09
I-WordPress isebenzise ngokwendabuko izibuyekezo zangemuva kusukela enguqulweni engu- 3.7 futhi yazisebenzela ngokuzenzakalela ukukhishwa okuncane. Ngosizo lwezihlungi, ungalawula ukusebenza ngokunembile, yini ngempela evuselelwa ngokuzenzakalela. Ukufakwa unomphela, okuzenzakalelayo ngokuphelele kwazo zonke izinto ezincane, ezinkulu, i-plug-in, ingqikithi nezibuyekezo zokuhumusha akuhloselwe, kepha kungenziwa ngenye indlela kalula.
Kube kukhona eziningi ama-plugin ukuthi ukwandisa imvamisa yiziphi izaziso abizwa ngokuthi futhi, kwezinye izimo, futhi athembisa ukufeza izibuyekezo kwangempela; Kepha awekho kulawa ma-plugins aphumelela ngokuthembekile. Ithuluzi lomugqa womyalo elinamandla i- WP-CLI linikeza isisombululo esifaneleke kakhulu (hhayi kuphela ngale njongo). Ngemuva kokufakwa okufushane , imigqa elandelayo (eyenziwe kufolda yephrojekthi ye-WP) iqinisekisa ukuthi zonke izibuyekezo zezinto ezingenhla zifakiwe ngaphandle kokukhetha:
I-oneliner elandelayo (engafinyezwa nge- alias noma ngamathuluzi afana ne- flimsy ) ingaqhutshwa kunoma iyiphi i-server ye-SSH (noma ngaphandle kwe-WP-CLI efakwe ngaphambili) ukuze ufake zonke izibuyekezo lapho ngasikhathi sinye:
Ifulegi le- --allow-root Liqinisekisa ukuthi amasistimu angasebenza njengomsebenzisi wezimpande (lokhu kubalulekile ezindaweni ze- WSL ). Ukuvuselelwa kwanoma iyiphi ingxenye ngaphandle kokuhlolwa kwangaphambili endaweni yentuthuko yendawo akunconywa ngaphansi kwanoma yiziphi izimo. Kodwa-ke, uma unendawo evikelekile ye-WP noma icala elikhethekile lokusetshenziswa ohlale ufuna ukunikezwa ngezibuyekezo zakamuva, yonke into ingazenzekela ngomsebenzi olula we-cron ngendlela yefayela le-bash:
I-WP-CLI ingenza okuningi kakhulu: engeza izindima zomsebenzisi, isuse imibono, iseshe futhi ishintshe izintambo ezinqolobaneni yolwazi, ingenise amafayela emidiya ... kufanele ubheke imibhalo . Okwamanje ngivule izingqinamba ezimbili zeGithub ezithinta izimbungulu ezincane kwimodyuli yolimi , kepha azimi endleleni yokusetshenziswa ezindaweni ezikhiqizayo.